Baidoa Media Center » GOGOL-XAADH: (Tix gabay ah)‏
GOGOL-XAADH: (Tix gabay ah)‏
July 30, 2012 - Written by admin - Edited byadmin Isimmadii, duubaabkii ama madax-dhaqameedkii Ummadeed wax ay geed walba u xaadhtaan oo gambadh walba ugu fadhiistaanba waxa ay isu geeyeen 825 Ergey oo hadda Muqdisho u fadhiya shir ansixinaya Dastuur Qaran oo loogu hayaamo dib u saamasho dawlad isu-talis ah, xushmaysan oo haybadaysan; dawlad huwan maamuuska dadweyneheeda; dawlad rigli ah oo an goob-kaga-kac ama meel-ku-gaadh ahayn; dawlad Qaran Soomaaliyeed; Dawlad Dadka Soomaaliyeed.
Sidoo kale, Hayaankii dheeraa wuxu tiicid kob-raagaaleysi iyo taako-taako guur ahaadaba, waxa la sheegay in uu (20 Agost 2012) ku aaddan yahay naq iyo xareed walacle oo yibal-tirad leh… maashaa Allaah… dhowaa… Ilaahow an waraabe la tegin!!. Maalmaha soo socda waxa kale oo la filayaa in Odayaalku bandhigaan 275 xubnood oo iyana noqon doona Cod-xanbaarayaal Shacbi (barlammaan)…. Kuwaas hawlsha u taal oo culus awgeed, waxa rajo tahay in loo xuli doono ma-dhaafaan aqoon iyo bisayl ahaanba xilkaas ammaano qaadi kara; oo an xag karkarnimo hawl ka maglaallacan, xag hufnaaneed hadhuub-raac noqon, xag xirribeedna an xaal iyo xaajona ka mahmahan; gaar ahaanna ku astooba gole Soomaaliyaysan oo leh nuxur “Soomaali xor ah” oo makanin kara masuuliyadda hogaaminta Qaran “Soomaali isna xor ah”…. Hogaamiyahaas, haddii Eebbe idmo waxan ku soo dhoweyn doonaa gabay tusmayn iyo wacad ballaneed ah… markii la gaadho gebo-gebada xilkiisana (haddii Eebbe qaddero) waxa an u tirin doonaa gabay ku garabsiiya dib-u-doorasho ama u horseeda dhicid (ridid)….
Maanta “GOGOL-XAADH” waxa ay xasuusinaysaa sooyaalkeedii (Berlin ka hor iyo kaddib); waxayna yaboohinaysaa Halyeygii tubta-toosan-ku-aaddinta siyaasadda mustaqbal ee Qaran iyo badhaadhe u gadhqaadka aayo-masiireedka ummadda Soomaaliyeed …
Geyi udugsan goobaan nicmo ah godan barwaaqaysan
Gasiin dalan carrada badhi gaddacan midho guduudnaadey
Gurrunjaa curdina xabag guntin ah geedo wada oon ah
Garannuug cas goodir iyo cawl gorayo duur-joog ah
Gammaan dooran, faras geed ku jira geenyo dananaysa
Baqal guro leh giindhay hayin ah gaambiye addeec ah
Geel kadin ah gaawaale ramag qaalmo gorinaaya
Rakuub golos ah, gool buuxsanmiyo korommo gaadiid ah
Lo’ gar maal ah, ido gorod madow giiryar oo dararan
Gu’ kacaama, webiyaal galgalan gacammo soo jiidan
Galley beeran gacamaale muus dalag garaarooba
Bad gingiman gadiir iyo qariib gurunbe jeerjeer ah
Dhaqan guun ah nolol gaariyada hoo’ is maal gelin ah
Gacmo deeqa gaafoodtan siman sahay is gaar-siinsan
Hayaan guura reero isu gala gooh la wada daaqo
Gob tolaysan xidid gaadasho ah gabadh xigaalaysa
Guri midan gurbood kala degdega gaan isma huraan ah
Ergo gaafan samo loo gurmado gaasas kala baaqda
Geed hadhac ah gedefaale baxay duqey gadhwaaxeedda
Garsoor qiinmay xeer gaasabaxay guurti dhex ahaadtay
Guddi shiray guddoon lagu khatimay talo la soo gooyey
Guul hanantay dhiro daawo galay taws xal laga gaadhey
Haro galacle, ceel ilo godlada galal duraabaaya
Godan nabad ah geediyo xareed beelo gaballaaxa
Garan-waa-cad gaal amar la yimi duul gunnimo diidey
Garri yoontay, waran-qaad gurmadey gamas hor loo boobay
Gidhli-dhacay gamuun aammus yiri nacab la googgooyey
Golli heestay, weer goosan nacay haad gadiidsanaya
Golxob dhiigle, gaaleen xinne ah hoodto geylimo leh
Gobannimo dhacsi ah guul magli ah calan naf loo gooyey
Gudmo reeb ah gudhan naanniyeed gaanyo dabo-keen ah
God waraabe yeelaal gufo leh tebin gurreytoobey
Galaabeen xun, haaneed gurracan sugulle gawdhgawdhey
Candho galow ah godol dhoohan iyo gacalo diiddowdey
Gorfo madhan, gadtaati caqday iyo guulal wada oomay
Galax baaqday goommane han jabay himilo goolowdey
Gedood dararay tuhun geeli-dhalay gudo is jeedaashey
Gamuun leexday good haah la yiri gamasyo waalaystay
Gabbaad dumey gojaxo baylahdiyo gaax la fadhataystay
Garwaaq raagey guud kala dibbadey goosan kala fiidhay
Galaa dhacay garoow god uga roor guro naf loo aadey
Gun-ka-unug xal geed-geed la biday goofaf dani uuntay
Gaag doogay guuleed cid tebey goror is doon-doontay
Dhis gangaanmey, goonyo is qabsaday saqaf ganboollaaday
Go’ madoobe waafeer gondood geeddi dhicisoobey
Yay garab ah gacan-haadis dhacay geyshash ina Xaam ah
Gaashaan tol hiil geesinimo madax wareer gooyey
Dhaxdin gudub hayaan geeddiyo ah socod la googooyey.
Boqor guud Garaad dadu-dhexe ah Duubab gole xaadhtey
Xul la guray yaqaan garasho dheer waracyo guubaabsan
Goob-kaga-kac xeer gacan qabsi ah codad galliimayn ah
Guryo muuqde reer galab-carraw tahan naq loo gaadhey
Gogol-xaadhan door gaadasho ah gole dhab loo tuujey
Godol sheegan gooraad cayiman Agos kolkaad gaadhto
Midaw gawdhsha goboleeye kada ururshe goobkiisa
Garsoor naca gaboodfale dulmiya caaddil gocadkiisa
Gallad diidda giiryaale nugul geesi dayadkeeda
Gurgur xaabsha gaafane hayina geelba reer ka cugtay
Baroor-golol ah suunnaari godan reer gammaan ka xigay
Gar buu qowmi guud iyo waddani rag uga geeraartay
Maxamuud Muuse Cali Caarre
KOOXAHA ARSENAL IYO CHELSEA OO U SOO BAXAY CHAMPIONS LEAGUE (SAWIRO)May 19, 2013
SHIR HORDHAC AH OO LOOGA HADLAYAY MAALGASHIGA SOOMALIYA OO MAANTA KA DHACAY MUQDISHO(SAWIRO)May 19, 2013
Dibadbax lagagasoo horjeeday Axmed Madoobe iyo IGAD oo ka dhacay Kismaayo.May 19, 2013
Bayaan kasoo baxay Xarakada Alshabaab qaybta Axmed Godane oo lagu naqdinayo qaar kamid ah hogaanka Xarakada.May 19, 2013
Dhegayso: ”Agaasimaha madaxtooyada Kamaal ayay kusoo biyo shubatay arintii xildhibaanada lagaga hor istaagay qadadii ay lahaayeen iyo kulankii, tallaabo ayaana laga qaadayaa”May 19, 2013
Gudoomiyaha gobolka Bay oo socod ku dhex maray magaalada Baydhabo si uu ugu kuurgalo xaalada magaalada. (Sawiro)May 19, 2013
Koobka Copa del Rey oo xalay ay ku guuleysatay kooxda Athlatico Madrid kadib markii ay ku gaaracday 2-1 Real MadridMay 19, 2013